Services - Shenzhen OTAO Technology Co., Ltd ..
OEM / ODM yeBrand Clients
OTAO ine 12000sqm fekitori, 200+ vashandi, uye mazana emachina chaiwo. Iyo inoshanda yakakwenenzverwa chaiyo kugadzirwa kunopupurirwa neBV, SGS, ISO, nezvimwewo kuverengera mhando uye kuverengera kununura munguva.
OTAO yakashandira mazana matatu+ eOEM brand vatengi vane zvakapfuma zviitiko uye humbowo hwehunhu, zvakapa inoenderana sevhisi yekudiwa inoenderana, dhizaini, mhinduro, mutengo, kugadzirwa, kutumira, kushambadzira, uye rutsigiro mushure-kutengesa.
OEM Brand vatengi
Yakasarudzika saizi dzakasiyana kana zvigadzirwa zvevatengi zvinodiwa pamidziyo, senge nharembozha, piritsi, Kamera, Mota, midziyo yemumba, uye michina yeindasitiri ...
Kupa mhinduro dzechigadzirwa kuti uwane chinodiwa chehunhu uye bhajeti, batsira mutengi wedu kuvaka zita, mutengo, uye makwikwi pamusiyano wezvigadzirwa, nezvimwe.
OTAO yakanga yatanga imwe izere SOP uye TQM yehunhu kudzora kutarisa yega mbishi zvigadzirwa, maitiro, uye chigadzirwa, kuve nechokwadi chekuburitsa munguva, uye kuvimbisa mhando yechigadzirwa chimwe nechimwe.
Kunyanya OTAO ine zviitiko zvekuvaka muridzi wemhando uye yakashandira vatengi vechigadzirwa, OTAO yakaunganidza chaizvo michina yekugadzira uye yakazara seti yemuchina wekuyedza wega wega maitiro, panguva imwechete, kuwedzera QC timu, yakagadziridza yega nzira, uye yakawedzera mamwe maitiro ekuti ukwanise.
Wako R & D timu / In-imba lab uye zvishandiso zvekuramba uchipa matsva uye epamberi mhinduro dzakashanda nemakambani eJapan, Korea neChinese kuR&D nyowani zvinhu zvekuchengetedza screen.
Kuenderera mberi kwekugadzirisa maitiro uye kugadzirisa kunoita musiyano muhombe pachigadzirwa kubatsira mutengi wedu kuti awane kumwe kukwikwidzana uye kunovhura zvinhu zvitsva mwedzi wega wega kuitira kuti mutengi wedu asimudzire zvinhu zvitsva kune vatengi vavo.
Enda kumiratidziro mizhinji uye pasocial media kuti uparadzire iyo mhando uye upe zvinoenderana zvinhu zvekusimudzira uye mafaera kubatsira
Tichaunganidza zvese zvinofambiswa uye zvishandiso, izvo zvichavhurwa nebrander mumakore, uye nekuvandudza inoenderana screen muchengeti epamberi 3-4months, zvichitevera maitiro ekushambadzira. Tichakurudzira izvo zvinopisa zvinoenderana.
Isu tinowana huwandu hukuru hwevatengi uye makomendi ekugadzirisa yedu kugadzirwa kwechigadzirwa nekuvandudza.